रकम निकासाको महिनौ बित्यो तर संचालन भएन रौतहटमा पीसीआर - No 1 News Portal Online News Nepal
Home मधेश प्रदेश रकम निकासाको महिनौ बित्यो तर संचालन भएन रौतहटमा पीसीआर
रकम निकासाको महिनौ बित्यो तर संचालन भएन रौतहटमा पीसीआर
गौर : रकम निकासा भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश २ को रौतहट जिल्ला स्थित गौर अस्पतालमा पीसीआर मेसिन जडान हुन सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा गत जेठ महिनामै गौर अस्पतालमा आरटी पीसीआर मेसिन जडान तथा व्यवस्थापनका लागि डेढ करोड रुपैया निकासा गरि सकिएको छ । तर हालसम्म जडान हुन सकेको छैन ।
हुनत अस्पताल व्यवस्थापकले उधारोमै एक साता अघि नै मेसिन जडानका लागि भौतिक संरचना तयार गरिसकेको छ । तर आपूर्ति केन्द्रले आजभोली गर्दै पन्छिदै आएका छन ।
अस्पतालका मेसु डा. कृष्ण यादवले भने आपूर्ति केन्द्रको निर्देशन बमोजिम हामीले पुर्वाधार तयार पारिसकेका छौं तर मेसिन कहिले जडान हुन्छ भन्ने पखाईमा बसेका छौं ।
यता आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख डा. प्रमोद यादवले मेसिन खरीद गरिसकिएको छ हाल प्रादेशिक ल्याबमा ट्राइलमा रहेको दाबी गरेका छन । उनले एक÷दुई दिनभित्रै जडान भइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
मन्त्रालयले जेठको अन्तिम सातामा सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम खर्च हिसाबमा जनकपुर र राजविराजमा थप आरटी पीसीआर मेसिन खरीदका लागि ४०/४० लाखको दरले ८० लाख रुपैया तथा गौर अस्पतालमा पीसीआर मेसिन संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि डेढ करोड गरी कुल २ करोड ३० लाख रुपैया केन्द्रको नाममा निकासा गरेको छ ।
जनकपुर र राजविराजमा आरटी पीसीआर मेसिन त जडान भयो तर गौर अस्पतालमा के कति कारणले जडान हुन सकेन भन्ने बारे आजभोली भन्दै पन्छिदै आएका छन । जनकपुर र राजविराजको लागि मात्र ४० लाख र गौरका लागि डेढ करोड निकासा गर्नु भनेको खुल्ला भ्रष्टाचार रहेको नागरिक समाजका अगूवाहरुको रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने बाटो कुर्दाकुर्दै अन्ततः शुक्रवार स्थानीय राजनीतिक, जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले पीसीआर मेसिन जडान र आइसोलेशन निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट ५ लाख, प्रदेश सांसदबाट ५ लाख, संघीय सांसदबाट १० लाखको दरले ४० लाख रुपैया चन्दा संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हुनत यसअघि साउन ३० गतेपनि डा. यादवले एक साताभित्रै पीसीआर मेसिन जडान हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर महिना बित्न लाग्दा पनि जडान हुन सकेको छैन । डा.यादवले मेसिन खरिद गरिसकिएको दाबी गरेपनि मेसिन खरिदका लागि टेन्डर भईसकेको र हालसम्म कमिसनको कुरा नमिलेकोले खरिद गर्न बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेशकै सबैभन्दा बढी संक्रमित जिल्लाको रुपमा रौतहट रहेको छ । रौतहटमा हालसम्म १ हजार ७ सय ८ जना संक्रमित भईसकेका छन् भने ५ जनाको मृत्यु समेत भईसकेको छ । lokpukar
Previous articleसुनचाँदीमा प्रयोग हुने लाखौको अवैध रसायन बरामद
Next articleकृष्ण प्रसाद अधिकारीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको व्यवस्थापन फितलो